भारतमा जन्मियो दुई यौनांग र चार खुट्टा भएको बच्चा ! - Asian Samachar
भारतमा जन्मियो दुई यौनांग र चार खुट्टा भएको बच्चा !
Asian Samachar बुधबार, पुस २७, २०७३ (10 months ago) बिचित्र
भारतमा महिला र पुरुष दुवै जनन्द्रीय भएको विचित्रको बच्चा जन्मिएको छ । बच्चाका खुट्टा पनि चारवटा छन् ।
युवतीको शरिरबाट पसिनाको सट्टा रगत बग्न थालेपछि….(हेर्नुस् भिडियो)